BeSoccer - Soccer Live Score 5.0.2.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.0.2.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား အားကစားမ်ား BeSoccer - Soccer Live Score
BeSoccer - Soccer Live Score ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
BeSoccer - ဘောလုံးတိုက်ရိုက်ရမှတ်ဖျေါပွခကျြ
BeSoccer သင်သည် 10000 ကျော်ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူနေ့စွဲအထိစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်ဦးဘောလုံး-based App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဂိမ်းနေထိုင်ပြီးပင်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်လွှဲပြောင်းတရားဝင် lineup သို့မဟုတ်အခါတိုင်းသင့်ရဲ့အဖွဲ့ရမှတ်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်နှင့်အတူတွန်းအားပေးအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ Whatsmore သင်တို့သည်လည်းအပါအဝင်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားများအတွက် In-depth stats browse နိုင်သည်လီယိုမက်ဆီ, ရော်နယ်ဒို, Neymar, Kylian Mbappéဟယ်ရီကိန်း, ဟာဇက်, Antoine Griezmann, မိုဟာမက် Salah, Sergio Ramos, လောနိတျမွို့မိုဒရစ်, ဆွာရက်ဇ်, Gerard Piqué ...
⚽️သင့်အရသာအညီ APP ကို ​​personalize
ရလဒ်များ, လိဂ်စားပွဲ, လွှဲပြောင်း, လ်တာ, စတာတွေအမျှကောင်းစွာအဖြစ်သင်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားကနေအားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်: လွှဲပြောင်း, ပန်းတိုင်, ကတ်များ, ဒဏ်ရာ, စတာတွေသင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများအနေဖြင့် Real-time အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိ
⚽️ LEAGUE table, ရလဒ်, လွှဲပြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
လူအားလုံးတို့သည်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ကမ္ဘာ့အဓိကအဖွဲ့ချုပ် (LaLiga, ပရီးမီးယားလိဂ်, စီးရီးအေ, အဘွန်ဒစ်လီဂါနှင့်လီဂူး 1) ကနေလိုခငျြနိုင်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ကဲ့သို့သောအခြားအပြိုင်ပွဲများ: ချန်ပီယံလိဂ်, အ Copa del Rey နှင့် အခြားသူတွေအကြားယူရိုပါလိဂ်။ အဆိုပါ 2018/19 ရာသီတစ်ကန်လက်လွတ်မနေပါနဲ့။ BeSoccer အတူသင်တို့လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတိုင်း၏ဒုတိယဌာနခွဲအနေဖြင့်အရေးယူလိုကျနာနိုငျသညျ။
တိုင်းကလပ် (Real Madrid အသင်း, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်, ဂျူဗင်တပ်စ်, ရိုးမား, မန်ချက်စတာစီးတီး, မန်ယူ, ချယ်ဆီး, လီဗာပူးလ်, ဘိုင်ယန်မြူးနစ်, PSG အသင်း) အဖြစ်သင်အကြိုက်ဆုံးကစားသမား (လီယိုမက်ဆီ, Cristiano တွေအားလုံးရဲ့ဆုံးပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များ ရော်နယ်ဒို, ဟာဇက်, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Neymar, Kylian Mbappé) ။
အလုပ်ရှာဖွေရေးကလပ်နှုန်းလမ်းကြောင်း, ပန်းတိုင်, ကိုကူညီပေးနေပေါ်လာ, နိုင်ငံတကာထုပ်, attribute တွေ, စျေးကွက်တန်ဖိုးအနေအထားကို, ဂုဏ်ထူး: အဆိုပါဒေတာဘေ့စအပါအဝင်သင်သည်အစဉ်အတစ်ဦးချင်းကစားသမားတွေအကြောင်းသိလိုနိုင်အရာအားလုံး, ပါဝင်သည်။
Messi OR စီရော်နယ်ဒို? MBAPPÉ OR Neymar?
သင်ကအကောင်းဆုံးကစားသမားနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူသည်အများဆုံးဂိမ်းကစားအများဆုံးဂိုးသွင်းပိုမိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သူပိုကောင်း attribute တွေရှိပြီးသူအများဆုံးကူညီပေးနေ, စတာတွေအခိုင်အမာထားပြီး
သတင်းနှင့်အပါအဝင်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများကိုခန့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ: စသည်တို့ကိုရီးရဲလ်ဘာစီလိုနာ, မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, မန်ချက်စတာစီးတီး, PSG အသင်း, ဂျူဗင်တပ်စ်, အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်,
သည်အခြားအားကစားအကြောင်းကိုသတင်း (ဘတ်စကက်ဘော, အပြေး, တင်းနစ်, ကြားတွင်, etc) ။
ဂိမ်းတိုက်ရိုက်မိနစ်-by-မိနစ် updates များကို။
သင်ရေကန်တစ်ဦးချင်းစီ gameweek အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့ Check
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် user interface ကို။ သုံးစွဲဖို့ Now ကိုပင်ပိုမိုလွယ်ကူ!
သင်ရှာနေဘောလုံးကွင်းရဲ့⭐If, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ app ကိုပါပဲ။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုကြှနျတျောတို့၏ app ကိုကျေးဇူးတင်စကားတိုးတက်အောင်ပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သွားလာရင်းမှ app ကိုတိုက်ရိုက်ရမှတ်များအဘို့ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့လိဂ်အဆိုပါ app ထဲမှာမပါဝင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးကျနော်တို့ထဲမှာ add ပါလိမ့်မယ်။
Facebook မှာ: Facebook.com/besoccerlivescore
Instagram ကို: BeSoccer.en
E-mail ကို: soporte@besoccer.com
BeSoccer - Soccer Live Score အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BeSoccer - Soccer Live Score အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BeSoccer - Soccer Live Score အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
BeSoccer - Soccer Live Score အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 1.8k 2.09M
BeSoccer - Soccer Live Score ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BeSoccer - Soccer Live Score အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.0.2.3
ထုတ်လုပ်သူ Manuel Gutiérrez Heredia
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.besoccer.com/legal
App Name: BeSoccer - Soccer Live Score
လက်မှတ် SHA1: 74:71:F7:68:19:1B:FD:FD:F2:54:57:74:A0:4A:EC:78:00:69:6E:04
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alejandro Sanchez Blanes
အဖွဲ့အစည်း (O): Resultados-Futbol.com
နယ်မြေ (L): Malaga
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Malaga
BeSoccer - Soccer Live Score APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ